Nei Kutendeseka Kushambadzira Kunobatsira Kushanda Kubudirira | Martech Zone
Nei Kuvimbika Kushambadzira Kunobatsira Kushanda Kubudirira
Muvhuro, Mbudzi 4, 2019 Muvhuro, Mbudzi 4, 2019 RJ Horsley
Kubva pakutanga, kuvimbika mibairo yezvirongwa kwakaratidza iyo yekuita-iyo-iwe pachako ethos. Varidzi vebhizinesi, vachitsvaga kusimudzira kudzokorora traffic, vaizodurura pamusoro penhamba dzekutengesa kuti vaone kuti ndezvipi zvigadzirwa kana masevhisi aive akakurumbira uye achibatsira zvakakwana kupa semahara kukurudzira. Ipapo, kwaienda kuchitoro cheko chekudhinda kuti vatore mapepa-makadhi adhindwe uye vagadzirire kupa kune vatengi.
Iri zano rakaratidza kuti rinoshanda, sezviri pachena nenyaya yekuti mabhizimusi madiki- nepakati-epakati (maSMB) achiri kutora ino yepasi-tech punch kadhi nzira, uye ndoiyi do-it-iwe wega ethos inosara pamoyo chizvarwa chinotevera chedhijitari kuvimbika zvirongwa. Musiyano chete ndewekuti zvirongwa zvekuvimbika kwedhijitari -zvakanakisa, zvirinani- zvinopa mikana yekudzoka kwakakura kunyange uchicheka nguva nemitengo inosanganisirwa neyepasi-tech nzira.
Iyo inonakidza kesi-mu-poindi ndeyekuti Susan Montero, junior chikoro chepamusoro mudzidzisi muCoral Springs, Florida, anosanganisira chirongwa chekuvimbika padhijitari mukirasi yake. Haisi iyo chaiyo yekushandisa-kesi yekuti munhu angatarisira sei kuvimbika mubairo chirongwa kushandiswa, asi padanho remidzi, Montero anotarisana nedambudziko rakafanana varidzi vemabhizinesi kwese kwese vanoita: maitiro ekukurudzira tarisiro vateereri kuti varatidze uye vapedze zvakanangwa chiito. Izvo zvinongoitika chete vateereri vaMontero vadzidzi pane vatengi, uye chavanoshuvira chakanangwa kuita mukirasi pane kutenga.
Nekuda kwekuchinjika muchirongwa chedhijitari kuvimbika, Montero anokwanisa kuita nyore purogiramu yake yemubairo kune zvaanoda, kutanga neyakajairwa mibairo kugadzirwa uye kuitiswa. Nechirongwa chake chetsika yekutendeka, vadzidzi vanowana mapoinzi ekuvimbika nekuratidzira kukirasi nenguva uye kutendeuka mumakirasi pazuva kana pamberi pezuva rakatarwa.
Vadzidzi vanogona kudzikunura iwo ekuvimbika mapoinzi, ayo Montero akagadzira aine tiered nzira. Pamashoko mashanu ekuvimbika, vadzidzi vanogona kuwana penzura kana eraser. Kune gumi mapoinzi, ivo vanogona kuwana rombo rakanaka rekuteerera kumimhanzi kana kuwana mahara snack. Uye kune vadzidzi vanochengeta avo mapoinzi, ivo vanokwanisa kuwana yekuchikoro yekupasa uye yekuwedzera-kiredhiti inopfuura makumi maviri nemakumi matatu mapoinzi.
Mhedzisiro yechirongwa chaMontero inoshamisa. Kusipo kune yakaderera nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, kunonoka kwakaderera nezvikamu makumi matatu nenomwe kubva muzana, uye pamwe zvinotonyanya kukosha, hunhu hwevadzidzi vekushandukira huri nani, chipupuriro chechokwadi chekuvimbika Montero chaakavaka nevadzidzi vake. Sezvaakazviisa,
Vadzidzi vanongopedzisa basa nekuwedzera kutsunga kana vakavimbiswa kuvimbika mibairo.
Zvinoratidzwa naMontero-kesi (uye budiriro) zvinoratidza mashandiro anoita dhijitari ekuvimbika panguva yekupa vashandisi mukana wekuti vakwanise kuzviisa kune zvavanoda, kunze kwebhokisi. Iyo yakafanana nzira yekubudirira iyo inogona kushandiswa kune maSMB, kutora mukana wavo wakasarudzika zvigadzirwa zvinopihwa uye yevatengi base, iyo iri chokwadi kuve neyayo yega nuances uye quirks.
Kunyanya, chirongwa chedhijitari chekuvimbika chinotendera maSMB ku:
sika tsika mibairo mu-mutsetse neyakagadzirwa yavo uye zvigadzirwa zvigadzirwa
Ipa vatengi vavo nzira dzakawanda kuti uwane mapoinzi ekuvimbika, kungave kuri nenhamba yekushanya, madhora ashandiswa, kana kutogovana zvemabhizimusi enhau enhau
Streamline iyo yekutarisa-mukati uye kudzikinura maitiro uchishandisa rakavimbika piritsi kana yakasanganiswa POS chishandiso
Shingairira mishandirapamwe yakanangwa kune chaiwo zvikamu zvevatengi, senge nyowani nyowani, vatengi vachipemberera zuva rekuzvarwa, uye vakapererwa nevatengi vasina kushanyira mune yakatemerwa nguva yenguva
Kurisa kusvika kwavo nekubatana nevatengi vatsva kuburikidza nehurongwa hwekuvimbika mutengi nharembozha
ona analytics pane yekuvimbika yekutarisa-kupinda uye kudzikunura kuti vakwanise kunatsiridza chirongwa chavo nekufamba kwenguva kwehuwandu hwepundutso
Automatically kuunza kuvimbika nhengo dzechirongwa mune yavo dhatabhesi dhatabhesi kuti vagone kuzosvika kune yavo inogara ichikura yevatengi rondedzero ine yakanangwa yekushambadzira mishandirapamwe
Zvirongwa zvekuvimbika zvechizvarwa chanhasi zvakanyanyisa uye zvine simba kupfuura nzira yechinyakare-yechikoro kadhi kadhi, uye mhedzisiro inoratidza izvozvo, kungave kuri kuchikoro chechidiki chesekondari kana yechinyakare SMB. Semuenzaniso, Pinecrest Bakery muPinecrest, Florida, vakaona yavo yekuvimbika mari kuwedzera neanopfuura madhora mazana matanhatu nemakumi matanhatu mugore rekutanga rekushandisa kwavo dhijitari kuvimbika chirongwa. Bhizinesi-remhuri bhizinesi ikozvino rakawedzera kuenda kunzvimbo gumi nenomwe uye kwavo kuvimbika kwedhijitari kunoramba kuri iro rekona rekona yavo yebhizimusi modhi.
Vazhinji vevatengi vedu vanouya kuzodya uye kofi yekudya kwemangwanani uye vozouya mumashure ezuva rekutora masikati pane kushanyira imwe café kana shopu yekofi. Ivo vanokoshesa chaizvo mimwe mibairo yekuvimbika kwavo.
Victoria Valdes, Mukuru Wezvekutaurirana wePinecrest
Mumwe muenzaniso wakanaka Baja Ice Cream muFairfield, California, iyo yakaona mari yavo inosvetuka ne300% mumwedzi miviri yekutanga yekuita chirongwa chavo. Bhizinesi diki rinowanzo wira mukuderera kwemwaka mukuda ice cream, asi nehurongwa hwavo hwekuvimbika kwedhijitari, ivo vakwanisa kuchengetedza bhizinesi rakadzikama uye richikura.
Kukura kwedu kwave kuburikidza nedenga remba.
Ongorora Del Real, Muridzi weBaja Ice Cream
Aya marudzi emhedzisiro haasi ekunze zvimwe. Ivo vari mushe mushe yekukwanisa kweSMBs kwese kwese. Zvese zvinotora kuzviita-iwe-pachako kutsunga kwakasanganiswa nehunyanzvi hweiyo chaiyo dhijitari kuvimbika chirongwa kuvhura mikova yekubudirira.
Tags: Ongorora del realbaja ice creamkuvimbika kwemutengichirongwa chekuvimbika kwedhijitarikuvimbika kushambadzirapinecrestPinecrest BhekarismbSusan MonteroVictoria Valdes
RJ Horsley ndiye Mutungamiri we SpotOn Transact, LLC, yekucheka-kumucheto kubhadhara uye software kambani inotsanangudza iyo mutengesi masevhisi indasitiri nekubatanidza akawanda-chiteshi ekubhadhara kugona neesoftware mhinduro kumakambani kuti ave nani kumhanya uye kukura bhizinesi ravo.
Rev: Audio uye Vhidhiyo Kudhinda, Dudziro, Captioning, uye Kudhinda
Kunyora Kubata Zvemukati Zvinoshandura zvebhizinesi